Home Ulo oru Europe Moussa Dembele Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Akụkọ Mours Dembele French
Na-amalite, a na-akpọ ya “Hunskelper“. Anyị na-enye gị mkpuchi zuru oke nke Moussa Dembele Childhood Akụkọ, akụkọ ndụ ya, Eziokwu Ezinụlọ, Ndị nne na nna, ndụ mbụ, ndụ onwe, ndụ na ihe omume ndị ọzọ ama ama malite mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Ndụ na ebili nke Moussa Dembele onye France. Ebe E Si Nweta Foto- SportsMole, Orange, Instagram na Leparisien
Ee, onye ọ bụla maara ya nwere onyinye dị elu, onye nkuzi nwere ezi ọgụ, uche nke itinye na anya maka ebumnuche. Agbanyeghị, naanị ole na ole na-atụle akụkọ Moussa Dembele nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Moussa Dembele na 12th ụbọchị nke July 1996 dị ka nwatakịrị nke abụọ nye ndị mụrụ ya na Pontoise, nzukọ na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke Paris, France. Ndị mụrụ ya bụbu ndị na-akwaga n'obodo ọzọ na ezinụlọ si n'obodo West West nke Mali.
Moussa Dembele mụrụ na France, sitere na ezinụlọ ya sitere na Mali
Ndi nne na nna a, mgbe ha bi na obodo ha na ndi 1990 mbu gbakoro na France ma lụọ na obere obodo Pontoise, nke ugwu Paris. Pontoise bụ ala dịpụrụ adịpụ nke Paris a na-ahụkarị dịka ebe obibi na ebe njikọta ezi na ụlọ maka ndị si obodo Mianmaa na-akwaga obodo ha maka France. Ị maara?… Mụ amaala ndị ọbịa na-amaghị ama na mpaghara a gụnyere ezinụlọ nke Moussa Sissoko na N'Golo Kanté.
A zụliteghị Moussa Dembele n'ezinụlọ ezinụlọ bara ụba. Dịka Kante, Nna ya na mama ya dị ka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ dị ala ma na-agụghị akwụkwọ agụmakwụkwọ kacha mma, oge niile jiri ego na-alụ. Moussa Dembele toro n'otu obere obodo dị n'ebe ugwu Paris na nwanne ya nwanyị nke na-aza aha Instagram Dembiz Balla na nwanne nwoke okenye nke ihe ndị amachaghị banyere ya.
Moussa Dembele toro n'akụkụ Sin nwanne ya nwanyị. Ebe E Si Nweta Foto- Instagram
Dika obere nwa, Moussa Dembele bu onye echebere nke ukwuu, onye ahapuru ya na ndi mmadu. Ọ nọghị na ọtụtụ ọrụ dịka ụmụaka ndị ọzọ nọ na mpaghara Pontoise. Kama ịmaba n'ime ka ya na ndị enyi ya gwuo egwu, Dembele'd chọrọ ịlaghachi azụ lelee nwatakịrị ahụ gụnyere nnukwu nwanne ya na nwanne ya. N'ihi omume a, ọ bụghị naanị ndị enyi ka ọ na-akpọ ka ọ gaa n'ụlọ ndị enyi.
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Nkụzi na ịrụ ọrụ
dị nnọọ ka N'Golo Kanté, onye ibe ya Malian nwere àgwà ihere, ịkpọ bọl ghọrọ isi iyi nke ntụkwasị obi na ụzọ mgbapụ nke Dembele si pụọ n'ihe ndị mere ná ndụ ya.
Obi dị m ụtọ, n'ihu ndị egwuregwu bọọlụ okenye na ndị nke ọgbọ ya, Dembele mụrụ otú ọ ga-esi na-apụ apụ, nwee obi ike ma nwee ntụkwasị obi ka ọ na-egosipụta bọl na bọl ahụ. Ọbụna mgbe ọ gara ụlọ akwụkwọ, ọ na-aga n'ihu na-egwu bọl n'oge ezumike na n'oge egwuregwu. Ọzọkwa, n'oge ezumike, Dembele na-aga n'ihu na-agba bọl maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa niile nke ụtụtụ na mgbede.
O were oge tupu Dembele amara na ya nwere talent iji mee ka ọ dị ka pro. N'inwe obi uto site na ihe ịga nke ọma nke ndị isi ojii na France 1998 iko ụwa, ọ malitere ịrọ nrọ iji iji bọọlụ dị ka ụzọ isi lụso ihe isi ike ọgụ na ịkwalite ọnọdụ ezinụlọ ya. Dembele sooro ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ ya gbaa ha ume, sị ha gbaa ya ume site n'ịsị- nrara ọ raara onwe ya nye egwuregwu ahụ bụ ntinye ego nke sitere na ịrụsi ọrụ ike na mkpebi siri ike ga-enyere ya aka bụrụ onye egwuregwu ịgba ọsọ ọkachamara.
N’ụbọchị kwesịrị ntụkwasị obi a gbasachara ụlọ akwụkwọ, Moussa Dembele gara n’ubi Pontoise dị n’obodo ebe a kpọrọ ya ka ọ bịa asọmpi n’agbata obi. Mgbe asọmpi ahụ mechara rụọ nke ọma, ozi banyere ya ruru ụlọ ọgbakọ ya. Ọ Theụ nke ezinụlọ ya niile amaghị oke dị ka akpọrọ ya ịga ọgbakọ klọb dị na mpaghara, US Cergy Clos.
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Ndụ Ndụ Mmalite
Inweta ikpe na klọb mpaghara US Clergy Clos - nke adịghị nfe ka ọ na-ada. O were mbọ nwanne Mousa Dembele tinye ọnụ tupu ha enye ya ọnwụnwa. N’okwu ya, dị ka FourFourTwo;
“Mgbe nwanne m nwoke chọrọ iso, ha kwuru na ha achọghị ya. Na ha enweela ọtụtụ ndị egwuregwu na-elekọta. Ma nwanne m nwoke siri ọnwụ: 'Naanị nye ya otu ọzụzụ, ọ bụ ya' 'Ha mere, ọ dịghịkwa akwa ụta. "
Moussa Dembele ghọrọ akụkụ nke ụlọ akwụkwọ US Cergy Clos Clos n'oge ọ bụ 6 mgbe ya na ha nwesịrị ikpe nke ọma na 2002. Mgbe ọ sonyeere klọb ahụ, a na-ebuga ya ka ọ kpọọ ọga n'ihu ma ozugbo, malitere na-enwu n'ọhịa.
Na njedebe egwuregwu ọ bụla, Dembele bụ ụdị nwatakịrị nke ga-atụfu ịgụta ebumnuche ya. Ọ bụ onye na-eme ihe mgbaru ọsọ ebumpụta ụwa nke nọ n'ọnọdụ ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. PSG matara nke ewu ewu ya mgbe o mechara ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ maka US Cergy Clos. Mgbe oge egwuregwu 2003 / 2004 gasịrị, dimkpa ahụ butere usoro ndị ọzọ na ọrụ ntorobịa ya na-aga n'ihu na usoro ịkụ ọkpọ ya na agụmakwụkwọ ndị ntorobịa nke Paris Saint-Germain FC
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Akpanwu akwukwo akuko
Moussa Dembele gara n'ihu na-aga ụlọ akwụkwọ ọbụlagodi mgbe ndị PSG kpọrọ ya. Ọ gụchara ụlọ akwụkwọ elementrị ya tupu ya edebanye aha ya Le Moulin à Vent Collège, emi odude ke Cergy, otu commune ke edere edere edere edere Paris.
Na PSG, Mousa Dembele malitere n'akụkụ U15 na oge 2010-2011. Omume ya dị egwu nke ịgba ọsọ na ngwụcha hụrụ ka ọ na-atụ ihe mgbaru ọsọ 40 na egwuregwu 30, ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke mere ka ndị nkuzi ya nwee mmasị. Na 2012, Dembele na ndi otu ya; Kingsley Coman, Presnel Kimpembe na Adrien Rabiot (niile eserese n'okpuru) ka ahọrọ ka isonye na Al Kass Cup na Doha.
Foto na-adịghị ahụkebe nke U17 PSG meriri Al Kass Cup na 2012. Moussa Dembele nọ na Rabiot, Coman, Ongenda, Kimpembe, Maignan na Dembele. Ebe E Si Nweta Foto- Leparisien
N'ime asọmpi ahụ, onye ọkpụkpọ French mara onwe ya ọtụtụ oge site na ịme ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ ndị siri ike, gụnyere ịgụta akara megide Barcelona. Mgbapụ ihe mgbaru ọsọ Dembele nyeere ndị otu ya aka inweta mmeri ahụ Al Kass Cup na Doha mgbe ọ gbadatusịrị Juventus na ikpeazụ.
Mgbe To ga-aga Siri Ike: N'ihe dị ka na mbụ gbasara 2012, enwetara asịrị nke ndị na - ewe PSG wee nwetagharịa site na ndị nwe billionaire ọhụrụ (Ulo Egwuregwu Qatar). Asịrị a tụgharịrị bụrụ eziokwu na March nke afọ ahụ. Ọ dị nwute, Moussa Dembele so na ndị agbanyeghị n'ọkwá dị elu, enyeghị ha ọkwa egwuregwu nke mbụ mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ agụmakwụkwọ. PSG nwere mmasị naanị ịzụta nnukwu egbe- nke ndị Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Kevin Gameiro wdg
ỌRAD, Dembele, n'agbanyeghị na-enyere klọb aka merie Al Kass Cup a ma ama ebe ọ bụla enwetara ya otu egwuregwu mbụ nke PSG. Onye ọkpọ nkụchụ ahụ kpebiri ibi na klọb obodo ya mgbe ọ nwetasịrị ụzọ ọrụ ya akpọchielarị ugbua ụlọ akụ na ụba nke Qatar Sports Investments hiwere.
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Na-ewu ewu Akụkọ
Moussa Dembele nwere nnukwu nsogbu iji bido ịmalite mba ofesi. Mgbe ọ dị afọ 16, o sonyeere ngalaba nkewa 2 n'akụkụ Fulham ebe ọ mere ka ekpughee ya Omenala ohuru, uzo nkuzi na omume. Dịka ọ na-eme mgbe niile na ndị otu egwuregwu Fulham U18, ihe omume Dembele hụrụ ya ka o merie nturu ugo Premier League na oge izizi ya na ụlọ ọgbakọ ahụ.
Moussa Dembele na-eme ihe ngosi ya na Fulham ka o meriri nturu ugo nke Premier League Young Player. Ebe E Si Nweta Foto- BBC
Mgbapụta Dembele sitere na Fulham's Craven Cottage gosipụtara na mba France U-21 nke mba ọzọ o mere ka ọ merie ọkpụkpọ France Under-21 nke afọ ahụ. Nyefe mbufe na-esote n'oge na-adịghị anya mgbe ị nwesịrị nsọpụrụ. N'etiti onyinye niile, nke ahụ maka Celtic dị ka Dembele ghọrọ Brendan Rodgers buru ụzọ banye na klọb ahụ.
Travelga ije na mpaghara osisi n'akụkụ ọnọdụ dị ize ndụ maka Dembele gara n'ihu na azụmaahịa football ya na Scottish Premier League, otu ọgbakọ nke ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ amabeghị. Moussa Dembele rụrụ ọrụ dị egwu maka Celtic n'oge asọmpi Champions League, gụnyere ịkọ ihe megide Manchester City (akara ikpeazụ 3-3) n'usoro otu.
Moussa Dembele diri nnukwu ịrị elu site n'ịgba Man City bọọlụ. Ebe E Si Nweta Foto- Hailhailmedia
Na mbido ịmalite oge n'azụ onye otu ibe ya Leigh Griffiths, onye France guzobere onwe ya dị ka onye ọkpụkpọ nọmba Brendan Rodgers, na-atụkwasị ihe mgbaru ọsọ 19 - ise n'ime ha bịara megide Rangers (ndị iro kasị ukwuu na Celtic). Ebumnuche Dembele (Ebumnuche 32 na egwuregwu 49 gụnyere azụ na azụ okpu-aghụghọ) duziri otu ha ka ha merie oge mmeri ha nke 2018 / 2019 Treble. Mmeri a hụrụ ndị fans na-akpọ ya dike.
Na oge 1 na Celtic, Moussa Dembele 3 trophies wee bulie ihe mgbaru ọsọ 32. Ebe E Si Nweta Foto- Twitter
Imeri Treble hụrụ Dembele na-akpọsa onwe ya na nnukwu ụzọ gaa na klọb ndị kacha elu na Europe. Na 31st nke August 2018, onye egwu 6-kpebiri kpebiri oge ịlaghachi mba ya, oge a bịanyere aka na Lyon 1 klọb Lyon.
UWA EGO: Moussa Dembele na-echere ịbọ ọbọ na PSG na oge ahụ mechara mechara ihe na-erughị ọnwa 6 nke isonyere Lyon. Maka ụfọdụ ndị egwu bọọlụ PSG, ikiri otu onye ọkpọ bọọlụ na-emegide ha bụ akụkụ na egwuregwu nke egwuregwu ahụ. Ma na-ahụ Moussa Dembele (onye soro ha gbu egwu) akara EGO EGO ma ndị egwuregwu na ndị egwuregwu. Moussa Dembele mere ememme megide ọgbakọ ochie ya nke gosipụtara enweghị okwukwe na ya.
Moussa Dembele nwere ụgwọ nkwụghachi ụgwọ na PSG, na-eme ka onye mgbaru ọsọ ahụ hie ụra wee mebie nnukwu ego nke klọb. Ebe E Si Nweta Foto FourFourTwo
Surelychụ ahụ akwụala ụgwọ maka Dembele kemgbe ọ nọrọ na Lyon. Ebe ọ bụ na mgbe ọ bọchara mmehie megide PSG, ọ gara n'ihu na mmeri meteoric, ihe mere ka ọ bụrụ otu n'ime akụrụngwa kacha ewu ewu na European football. Igwe Dembele na Lyon naanị nwere ike ịha ka nke a Karim Benzema na Alexandre Lacazette ndi bu ndi okenye ya nke Lyon.
Moussa Dembele Bilie na Ebe E Si Nweta Akụkọ Ama Ama: Gwa, 360nobs na Twitter
Ndị ọzọ, dịka anyị na-ekwu mgbe niile, bụ akụkọ ihe mere eme.
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Ndụ mmekọrịta
N'ihe banyere ihe ịga nke ọma niile a rụzuru n'afọ ndị gara aga, o doro anya na ndị egwuregwu bọọlụ ga-echerịrị onye Moussa Dembele nwere nwanyi. Onweghi agọnarị eziokwu ahụ na ịma mma ya mara mma na ọdịdị egwuregwu ya agaghị etinye ya n'elu ndepụta nwa nwoke ọ bụla nwanyị chọrọ.
Ndị egwu emeela ajụjụ banyere onye Moussa Dembele Nwanyị nwanyị nwere ike ịbụ. Ebe E Si Nweta Foto- Instagram
Mgbe ọtụtụ nnyocha gasịrị na ịntanetị, Ọ na-apụta n'oge edere, Mousa Dembele etinyewo mgbalị siri ike ịghara ikpughe onye bụ nwanyị ma ọ bụ nwunye ya (nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ọ lụọla nwaanyị). Ma ọ bụ nwere ike ịbụ na ọ lụghị nwanyị, nke na-egosi enweghị ịdị adị WAG.
Anyị maara oge ụfọdụ ịgba bọlbụ mmadụ nwere ike ịgbagharaghị ya ma ọ bụrụ na agwakọta ya na ihe metụtara mmekọrịta. Maka nke a, ọ nwere ike ịbụ na Moussa Dembele ka bụrịrị ka o lekwasị anya na ọrụ ya kama ịchọ enyi nwanyị na-enweghị ego ma ọ bụ nke ga-abụ ihe nwunye.
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Ndụ nke Onye
Tomara Moussa Dembele Ndụ Ndụ Eziokwu ga - enyere gị aka inweta nkọwa zuru oke banyere ụdị onye ọ bụ.
Dịka e kwuru na mbụ, Moussa Dembele mụrụ dịka onye ihere ma dịkwa nwayọ mana mechara chọpụta ihe kpatara ịgbanwe echiche ya na ndụ ka ọ na-etolite ma nwee ume. Akụkọ ihe mere eme ya enweghị nke ịchụ n’achọghị aja. N'ime ọtụtụ afọ, Dembele egosila ndị ọrụ egwuregwu bọl na ya nwere ike imeghari ya n'ụzọ dị mfe dịka ike gbara ha gburugburu, dịka a hụrụ site na njem ya niile na England gaa Scottland. Moussa Dembele nwere ikike ịghọta ihe ọdịnihu ma mara ihe ọ chọrọ, ebe ọ ga-anọ na ihe ọ ga-eme afọ ise ma ọ bụ iri site n'oge edere.
Na ibe ọzọ nke ndụ onwe ya, Moussa Dembele kpọrọ asị na-ezighi ezi n'ihi na ọ bụbu ya onwe ya ka ọ nọ na ụlọ akwụkwọ PSG. N'ihi nke a, o nwere okwu nche nke na-aga dịka nke a;
Onye na-enweghị okwu ya bụ ihe ọ bụla (ọ dịghị mmadụ ọ bụla).
Tomata Moussa Dembele Ndụ Nkeonwe pụọ na Football. Ebe E Si Nweta Foto to Twitter
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - si ebi ndụ
N'oge edere, Moussa na-enweta € 48,000 kwa izu. Nke a bụ ego buru ibu, ga-ezuru ya ibi ụdị ndụ ọ na-ebi. Agbanyeghị, na-ekpe ikpe site na nzipu ozi na akaụntụ media ya, Moussa Dembele dikwa amamihe na ijikwa ego ya na dibobo n'agbata ezi ihe na obi uto abughi ihe siri ike nye ya. Enweghị akara nke ụgbọ ala flashy, ụlọ obibi, ụlọ ọkụ, ụmụ nwanyị wdg.
Moussa Dembele salon- Ọ n'oge edeghị ede. Ebe E Si Nweta: Gym4you
Ọzọkwa na ndụ ya, Moussa Dembele bụ onye na-ahụkarị onwe ya n'etiti ndị otu dị iche. Otu oge nwata na-eme ihere ma dị jụụ na-ahụ onwe ya ka ọ chọrọ ịbụ onye mbụ n'ihe niile - site na ọrụ gaa na nnọkọ ntụrụndụ.
Ndụ Moussa Dembele- Ọ bụ onye na-elekọta mmadụ ma mụtala ịnọ na ndị enyi. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Ndụ Ezinụlọ
Ihe ịga nke ọma ezinụlọ Moussa Dembele nwere na ya (onye na-ejikwa ya achị achị achị) maka ime ya na football. N'oge edere, ndị otu ezinaụlọ Dembele ejirila atụmatụ iji mesoo aha a na-abịa na otu onye ezi na ụlọ na-aga nke ọma.
N'oge edere, ha niile Ndị otu ezi-na-ụlọ (nne, nna, nwanne nwoke, nwanne nwanyị, wdg) na-achịkwa ihe ịga nke ọma Moussa site na ibi ndụ ndụ na nzuzo na France n'agbanyeghị paparazzi na-aga n'ihu na ọtụtụ ụzọ iji jikọọ na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụ ezie na ndị nne na nna Moussa Dembele na nwanne ya nke mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-amaghị, nke nwanne ya nwanyị nke okenye nwere ike ịnweta ma debe ya na nzuzo (n'oge edere) nke mere na ọ bụ naanị ndị na-eso ụzọ ya masịrị ha ga-ahụ ihe ọ na-ekerịta.
Moussa Dembele Sister nwere akaụntụ akaụntụ nke Instagram ya na nzuzo nke mere naanị ndị na-eso ụzọ a nabatara nwere ike ịhụ ihe ọ na-ekerịta
Moussa Dembele Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu - Eziokwu efu
EGO kachasị mma nke 10 (2019): Ọ bụzighi akụkọ na enwere mkpụmkpụ ndị egwuregwu bọọlụ nwere aha nna 'Dembele'. Aha 'Na-agbagha'A ma ama n'etiti ndị na-eme egwuregwu ọdịda anyanwụ African Family sitere na ya, ọkachasị ndị si mba Mali. Na nnọkọ a, anyị ahọpụtala 10 Dembeles kachasị mma na egwuregwu ahụ.
LifeBogger na-egosi usoro kachasị mma nke 10 n'ime ọtụtụ narị egwuregwu ụwa ga-enye. Ebe E Si Nweta: Barcablaugranes, SportsMole, Mercato365, mgbaru ọsọ, 90Min, Grimsby na Twitter
Ha gụnyere 1: 1 - Ousmane Dembele, 2 - Moussa Dembele nke anyi, 3 - Mousa Dembele, 4 - Karamoko Dembele, 5 - Mana Dembele, 6 - Siriki Dembele, 7 - Malaly Dembele, 8 - Bira Dembele, 9 - Mahamadou Dembele na 10 - Aliou Dembele.
Nkọwapụta Anya Anya: Maka Moussa Dembele, idebe anya ya n'anya nkịtị n'oge oge nsogbu n'ime egwuregwu bọọlụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume. Nke a bụ ihe metụtara ya Phil Jones ' ọdịdị ihu n'otu oge.
Nchịkọta Moussa Dembele Eye Expressations. Ebe E Si Nweta Foto: Sun, SportsMole, Mercato365, Skysports Na Twitter
Nkọwapụta ihe banyere ndu banyere Moussa Dembele AnyaNgwurugwu nke nku anya ya bu ihe nke emeghi ka enwee ya ike ikwudo ya na obi. Nke a na - eme naanị n'oge nsogbu n'oge egwuregwu bọọlụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ ussamụaka Akụkọ Moussa Dembele Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.